Igumbi labantu abashishini, elinebhedi ephindwe kabini.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguSaionara
Ifanele ifanitshala yebespoke, ihonjiswe kakuhle, nayo yonke intuthuzelo kunye nendawo eyaneleyo. Ukukhanyisa okukhethekileyo kuwo onke amagumbi. Iindwendwe zinokufikelela kwiindawo eziqhelekileyo zendlu, kunye namagumbi ahlukeneyo, kodwa ndihlala kwindawo yokuhlala kwaye ndinesilwanyana sasekhaya, ngoko kukho ukuhlalisana nam kunye nezinye iindwendwe. ngasese kuphela kwigumbi obhukisha ngalo
indlu enamagumbi okulala ama-3, ibekwe kakuhle, kufutshane nedyunivesithi, iivenkile zokutyela, imivalo, ivenkile enkulu, iyunithi yezempilo. ekhoyo 1 igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, amagumbi, iTV eneNetflix, undwendwe lukwazi ukusebenzisa iindawo eziqhelekileyo zendlu. igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nezinye iindwendwe. banokusebenzisa ikhitshi, indawo yokuhlamba impahla, igumbi lokuhlala nelokutyela, ipatio.
ithathwa njengendawo ephezulu, kwaye ikufutshane nayo yonke into esele ndiyikhankanye. ukubanakho ukuhamba kwiindawo zokutyela ezininzi, imivalo kunye neeyunivesithi. Ukufikelela kumbindi wesixeko, malunga nemizuzu eyi-10 ngeenyawo.
Izithuthi zikawonke-wonke ngaphantsi kwemizuzu emi-3 ukuya kuyo nayiphi na indawo yesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Saionara
imeyile watsapp kunye nefowuni
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lages